Qeybta:Ogaysiiska2 min akhris
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno soo bandhigida mcknight.org cusub oo kobcisay, oo ay la sameeyeen shuraakadayada Visceral.
Laga bilaabo bilawga dib u qaabeynta, waxaan diirada saarnay su'aasha aasaasiga ah: Sidee websaytkayagu u sii wadi karaa howlgalka iyo si ka fiican u adeega martida?
Waxaad Baaqday, Waxaan Isxaaqnay
Waxaan si weyn ugu mahad celineynaa in ka badan 350 qof oo naga caawiyey in aan ka jawaabno su'aalaheena si aan uga jawaabno sahankeena, waxaanaanu kordhinaa mahadnaqa daraasad kale oo si deeqsinimo ah noogu soo bandhigay talooyin iyada oo loo marayo wareysiyo qoto dheer.
Waxay ahayd mid dhiiri galisay in ay maqasho sida dadku uga mahadcelinayaan daahfurnaanta boggayaga internetka, taas oo xaqiijinaysa in tani ay tahay kheyraad qiime leh.
Waxaan sidoo kale maqalnay talooyin gaar ah oo ku saabsan hagaajinta. Qaar badan oo idinka mid ah ayaa sheegay in aasaaska u baahan yahay inuu sameeyo wax ka badan wargelinta; waxay u baahan tahay dhiirigelin, sidoo kale. Sidaas awgeed waxaan ku darnay sawirro muuqaal ah iyo sheekooyin muuqaal ah. Waxaan maqalnay codsi caddayn dheeraad ah oo ku saabsan waxa aan maalgelineyno iyo sababta, sidaas awgeed ayaannu u qaadnay daryeel qaar ka mid ah sharaxaadda faahfaahsan ee ujeeddooyinka barnaamijka iyo habsocodyada codsiga. Kuwo badan baa ammaanay sheekada muuqaalka iyo bini-aadannimada ee kobciyadayada ugu horeysay warbixinta sanadlaha ah waxayna muujisay rabitaan ah in la arko habab badan. Waan isku afgaran karnaa, oo hadda waa taas oo ah nooca boggayaga ee aanu ku siin karno.
Diirad ku Saabsan Horumar Dhaqameedka
Waqtigaagu waa mid qiimo leh. Iyadoo dib loo cusbooneysiinayo waxaan rajeyneynaa in aragtida iyo ilaha aad heshaa ay kaa caawin doonaan inaad sameyso hawsha muhiimka ah ee hagaajinta beelaha.
Halkan waxaa ku yaal dhawr qalab:
Grantseekers waxay booqan karaan hal bog oo bixiya fursadaha maaliyadeed ee dhammaan barnaamijyadeenna barnaamijyada, oo ay ku jiraan faahfaahinta sida juqraafi ahaan iyo in habka dalabku uu furan yahay ama marti-ku-gaar ah.
Deeqaha waxay ka heli kartaa jawaabaha su'aalaha sida sida loo xaliyo codsiga online ama sida loo codsado a booska kulanka. Iyo haddii aad raadinayso inaad si qoto dheer uga foorarsato aag barnaamij gaar ah, waxaad hadda arki kartaa fikradaha aan bixinno iyo cilmi baarista aan la leenahay barnaamijkaas mid ka mid ah goob dhexe.
Waxaan sidoo kale tuurnay nuxurka muddada dheer uu dhacay iyo inaanan ka muuqan shaqadayada. Saaxiibadeena IssueLab, xarun aqooneed oo la wadaago qaybta bulshada, waxay yeelan doontaa warbixin kasta oo muhiim ah. Xaq ayaad u leedahay inaad la xiriirto kooxda isgaadhsiinta haddii aad dhibaato ku qabtid helitaanka wax aruurin ah.
Raadinta Cusub ee Maalin Cusub
Ugu dambeyntii, waxaa laga yaabaa in aad ogaatay inaanu siinay aqoonsigeena muuqaal-celin oo ku saabsan dhammaan barnaamijyadeena dhijitaalka ah. Waxaan cusbooneysiinnay calaamadayada, oo ka dhigtay "The" oo ka yimid magaca dadweynaha. Sidaa u sii gudbi oo naga soo wac Mashruuca McKnight Foundation, taas oo ah sida qof waliba noogu soo gudbiyo. Oo waxaan dooranay qaabka noocyada casriga ah ee casriga ah iyo palette midabka. Isbedelka ayaa si aan macquul ahayn u degsan, waxaanay joogteyneysaa dhaqankayaga dheer sida aan ku sii wadi karno da'da dijitaalka.
Ku raaxee bogga - oo markiiba na soo booqo!
Khilaafka oo ah Calaamadda Rajada
By Kara Inae Carlisle Juun 2021
Maamuusida George Floyd: Qoraallada Shakhsiyeed ee Shaqaalaha McKnight